Vilaniny fandraofan-davenona sy mpamboly
Linshu Yimeng Qingliu Craftwork Co., Ltd locates in Linyi tanàna, aiza malaza amin'ny maha-hometwon ny fotsy wicker. Amin'ny maha-lehibe-Nananika ny fanamboarana, afaka manome karazana hazomalahelo samihafa amin'ny zavatra faran'izay marefo famolavolana sy ny kalitao.
Niorina tamin'ny 2001. taona folo taona no nanatri-maso ny fampandrosoana haingana ny orinasa. 20000 metatra toradroa fibodoana tany, dia mampiasa ny 500 mpiasa toy ny tany am-boalohany namorona, izay samy efa spealized amin'ny interweaving ho ela, ny asany dia nahazo laza lehibe avy any an-trano na sy tany ivelany.
Amin'ny maha-matihanina mpanondrana, dia manana traikefa ampy amin'ny fanondranana hazomalahelo asa tanana, hatramin'ny androany, no nanorenanay barotra fifandraisana amin'ny firenena maro eran-tany, indrindra any Eoropa, any Amerika Avaratra sy ny sisa, ary nahazo voninahitra tsara avy amin'ny mpanjifa.
Kalitao sy ny mpanjifa dia ny fitsipika.
Production dia nanao fandaharana araka ny sary, famaritana na ny santionany. Rehefa manome anay tapa-taratasy famolavolana, tsara tarehy tany an-danitra asa tanana isika dia afaka manao ho anao.
Isaky ny nanontany ho ankasitrahana.
Hancun, Linshu Country, Linyi City, Shandong Province, Sina
+ 86-0539-6310232 (Famokarana Department)
TSARA ao an-trano: Holiday Decor manome mamy ...